တနင်္လာနေ့, မေလ 28, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါကြီးမားတဲ့ပန်ကာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် ပလောင် ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မြင်သည်ကတည်းက။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းအပါအ ၀ င်နေရာတစ်ဒါဇင်ခန့်တွင်လိပ်စာစာအုပ်များကိုအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တွင် LinkedIn အကောင့်တစ်ခုရှိသည်။ သူတို့အားလုံးကိုထိပ်ဆုံးမှာထားခြင်းက Plaxo အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်…စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။
မင်းသိတဲ့လူတိုင်းကသင့်ရဲ့လိပ်စာအချက်အလက်တွေကိုသင်၏လိပ်စာစာအုပ်ထဲမှာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်သင်ဘယ်တော့မှမထိရတော့ဘူးဆိုပါစို့… Plaxo ပဲ! Plaxo ရှိသင်၏အဆက်အသွယ်များ၏အလုပ် (သို့) အိမ်အချက်အလက်များကို 'subscribe' လုပ်ပြီးသင်၏လိပ်စာစာအုပ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါက Plaxo သည်ကျန်များကိုဂရုစိုက်သည်။ ကဒ်နှစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးသင်ပေါင်းစည်းမှုကိုကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည့်အလွန်ဥာဏ်ရည်ရှိသည့် de-duper တစ်ခုတောင်မှရှိသည်။
ငါဒီနေ့လည် Plaxo ထဲကို ၀ င်ပြီးအံ့ got စရာကောင်းတဲ့အံ့သြစရာတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ငါကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Plaxo ပင်မစာမျက်နှာထဲကိုခေါ်သွားတယ်။ လိပ်စာစာအုပ်၊ ပြက္ခဒိန်၊ ကျွန်ုပ်ထပ်တူပြုခြင်းရင်းမြစ်များနှင့် Meebo မှဘရောက်ဇာအခြေပြု Instant Messaging၊ ကဒ်များ၊ အလုပ်များ၊ မှတ်စုများ၊ Yahoo မှမြေပုံများ နှင့်ပင် Jajah အားဖြင့် IP ကို ​​Voice over Call ဖို့ကိုနှိပ်ပါ!
ငါလုပ်သမျှငါကွန်ယက်ချိတ်ဆက်သူမည်သူမဆိုအတွက်, ဒီကိရိယာကိုမဖြစ်မနေရှိရမည်! ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူသောစိတ်ကူးကျဉ်းမြောင်းသော interface ကိုအတူမိုဘိုင်း - ဘရောက်ဇာကနေတဆင့်တောင်မှရယူနိုင်သည်။
မေလ 28, 2007 မှာ 8: 41 pm တွင်
မေလ 29, 2007 မှာ 4: 39 AM
သင်ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပါသလား 'contact de-duper' ကဲ့သို့သောအထူးစွမ်းဆောင်ချက်အချို့သည်ပုံမှန် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်သင့်သောအရာများဖြစ်သည်၊ သို့သော်စီးပွားရေးကိစ္စကိုကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်ပါ။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ LinkedIn ကိုပရိုဖိုင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်း၏စိတ်ကူးကြိုက်တယ်။
ပြီးတော့မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုကလည်းကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါ N95 နဲ့လိပ်စာစာအုပ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် Mac ပေါ်မှာ iSync ကိုသုံးပြီးပြီ။ သို့သော်၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှလာရန်လွယ်ကူစေသည်။
မေလ 29, 2007 မှာ 7: 52 AM
ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပေးဆောင်ပါတယ် ထပ်တူပြုခြင်းအသစ်သည်သင်၏ Mac Address စာအုပ်နှင့် iCal နှင့်ထပ်တူပြုလိမ့်မည်။ ငါကသဘောတူသည်, က de-duper တစ် ဦး မဖြစ်မနေရှိသည်ဖြစ်ရမည်။
Tony Chung က CA၊
မေလ 29, 2007 မှာ 11: 47 AM
အိုကေ Doug၊ ငါ Kool-aid ကိုသောက်ပြီး Outlook အတွက် toolbar ကို download လုပ်သည်။ ဒီဟာကငါရှာနေတာသေချာတယ် ချိုမြိန်!
မေလ 29, 2007 မှာ 7: 43 pm တွင်
မင်းတိုစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုမင်းကမင်းကိုလမ်းလွဲမသွားစေဘူးလား။ 🙂
မေလ 30, 2007 မှာ 11: 06 AM
ဇွန် 14, 2007 မှာ 9: 39 pm တွင်
သင်ထွက်စစ်ဆေးသင့်သည် spock.com။ ငါငါ့ plaxo အဆက်အသွယ်အားလုံးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် spock.com။ ဒါဟာလုံးဝအေးမြတဲ့ application ပါ။ ဒါဟာ plaxo ဖြစ်သင့်သည်အရာဖြစ်တယ်။
ဇွန် 14, 2007 မှာ 10: 38 pm တွင်
ကျွန်ုပ်သည် Spock သို့ဖိတ်ကြားရန်လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် Plaxo ကိုမည်သို့အနိုင်ယူနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ! ငါကလေပြင်းကိုပေးမယ်!